သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ ခရီးသွားလာမှုကန့်သတ်ချက် ဖြေလျှော့ပြီးနောက် ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၁ ဦးရှိ - Xinhua News Agency
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့၌ ဇွန် ၂၁ ရက်က ဘတ်စ်ကား စီးနင်းရန် စောင့်ဆိုင်းနေသော ပြည်သူများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကိုလံဘို ၊ ဇွန် ၂၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း တစ်လကြာ ခရီးသွားလာမှုကန့်သတ်ချက်အား ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် တာဝန်ရှိသူများက ဖြေလျှော့လိုက်ပြီးနောက် လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၁ ဦး ရှိကြောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် သိရသည်။နိုင်ငံအနှံ့ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် သေဆုံးသူများတွင် ဆိုင်ကယ်သမား ၆ ဦး ၊ စက်ဘီးစီးနင်းသူ ၂ ဦး ၊ လမ်းလျှောက်သွားလာသူ ၂ ဦး နှင့် ကုန်တင်ယာဉ်နောက်လိုက် ၁ ဦးတို့ ပါဝင်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဒုတိယရဲစစ်ဆေးရေးအရာရှိ Ajith Rohana က ပြောကြားခဲ့သည်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ဘေးကင်းစွာ မောင်းနှင်ကြရန် ၎င်းက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ မျိုးဗီဇကွဲအသစ် တွေ့ရှိခြင်းနှင့်အတူ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု တတိယလှိုင်းအား ကြုံတွေ့ရသဖြင့် မေလတွင် သတ်မှတ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ခရီးသွားလာခြင်း ကန့်သတ်ချက်ကို ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် တာဝန်ရှိသူများက ရုတ်သိမ်းပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ခရီးသွားလာမှုကန့်သတ်ချက်အား ဇွန် ၂၃ ရက် ည ၁၀ နာရီအချိန်တွင် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ဇွန် ၂၅ ရက် နံနက် ၄ နာရီတွင် ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Sri Lanka reports 11 deaths from road crashes after travel restriction lifted
COLOMBO, June 22 (Xinhua) — The Sri Lankan Police said on Tuesday that 11 people have died from road accidents within the past 24 hours after authorities liftedamonth-long nationwide travel restriction on Monday.
Police spokesman Senior DIG Ajith Rohana said six motorcyclists, two cyclists, two pedestrians andahelper ofalorry were among those who have been killed in the accidents across the country.
Rohana urged motorists to drive safely.
Sri Lankan authorities on Monday liftedanationwide travel restriction which was imposed in May as the country facedathird wave of the COVID-19 outbreak with the detection of new variants.
However, the nationwide travel restriction will be re-imposed again on June 23 at 10:00 p.m. and will be lifted on June 25 at 4:00 a.m. local time. Enditem
Photo – People wait for buses in Colombo, Sri Lanka, on June 21, 2021.Sri Lankan authorities on Monday temporarily liftedanationwide travel restriction which was imposed in May to allow essential work of people. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)